ကလေးတွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက စိတ်ချရလား - Hello Sayarwon
ကလေးတွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက စိတ်ချရလား
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 16/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
1890ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း 120ကြာပြီးနောက် (ဒီနေ့ခေတ်)မှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှာ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက ဆွေးနွေးစရာကိစ္စကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အကူတွေ မပါလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရုံကြောစနစ်နဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်း
အာရုံကြောစနစ်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ အာရုံကြောတွေကြားက ဆက်သွယ်မှုက မသေချာဘူး၊ ယိုယွင်းနေတယ်၊ ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အရာအားလုံး မှားယွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ လေထိုးလေအောင့်၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ နို့်မစို့နိုင်ခြင်း၊ မနက်စာမစားခြင်း၊ အအိပ်နည်းခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခြင်း၊ အစာခြေရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခန်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်၍မရခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက ကိုယ်တွင်းက ဆက်သွယ်မှုအမှားတွေရှိရင် ရှာတွေ့နိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရာတွင် ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
သုတေသနပညာရှင်တွေက ကလေးတွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက ADHD, ရင်ကြပ်ရောဂါ၊ လေနာရောဂါစတာတွေအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးရှိသလဲဆိုတာ အသေးစိတ် လေ့လာနေကြပါတယ်။ ကျောရိုးတွေမှာ ပြဿနာ (သို့မဟုတ် အာရုံကြောပြဿနာတွေ) ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေကြောင့်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အိပ်တဲ့အနေအထား မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ပုံစံတစ်မျိုးထဲ အကြာကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ခလုတ်တိုက်ပြီး ချောလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အစားအသောက် ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေကြောင့်၊ စိုးရိန်ပူပန်မှုတွေကြောင့် စသည်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဘဝနေနည်းတွေက ဖိအားမဖြစ်စေရင်တောင် သားအိမ်အနေအထား၊ ကျုံ့ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်တွေ ထိတွေ့ခြင်းကတောင် အာရုံကြောကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ကလေးမွေးချိန်ကြာခြင်း၊ မြန်လွန်းခြင်း၊ ညှပ်ဆွဲမွေးခြင်း၊ ဗိုက်ခွဲမွေးခြင်းတွေကလည်း အာရုံကြောကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
သုတေသနပြုမှုတွေအရ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက ထိရောက်တာကို သိပ်မတွေ့ရသေးသော်လည်း မိဘတွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုရခြင်းကို အလွန်တွေ့ရတယ်။
ကလေးတွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်ကြတာက-
၁. ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပေးတယ်။
၂. ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေရန် အထောက်အကူပေးတယ်။
၃. ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး အအေးမိခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်းနဲ့ နာဖျားခြင်းတို့ ကင်းဝေးအောင် ကူညီပေးတယ်။
၄. ကလေးတွေ လေထိုးတာ၊ မအီမသာဖြစ်တာတွေကို လျော့နည်းစေတယ်။
၅.ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတို့အတွက် ကောင်းပါတယ်။
၈. ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အပြုအမူတွေ မဖြစ်စေဘူး။
၁၀.အိပ်ရာထဲသေးပေါက်ခြင်းနဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကူညီပေးတယ်။
အာရုံကြောစနစ်နဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထောက်ခံထားတာမရှိတဲ့ သက်သေပြချက်များ
မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အရိုးတွေကို လက်နဲ့ပြင်ပေးတာကို ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးကြပါတယ်။ ဒါက ကလေးတွေရဲ့ အာရုံကြောကို ကောင်းကျိုးရရှိစေပါတယ်။ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးအဆစ်များကို ဂရုစိုက်ခြင်းက ကလေးရဲ့လည်ပင်းကို မှန်ကန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့တော့ အရင်တိုင်ပင်ရပါမယ်။
ဒီအကျင့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နားစည်ကပြွန်တွေ ဆွဲဆန့်ထားသလိုဖြစ်ပြီး နားအူတာ၊ နားထဲက အရည်တွေထွက်တာရဲ့ လက္ခဏာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုကုတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နားစည်ယောင်ယမ်းခြင်းဖြစ်စေပေမယ့် ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ကလေးကို ပိုးသတ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ ကလေးဆရာဝန်ရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာ ထားသင့်ပါတယ်။
နားစည်ယောင်ခြင်းက အသက်၃နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကလေးက အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကလေးရဲ့ နားစည်အတွင်းက ပြွန်ကရှည်လာပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက လည်ချောင်းကနေတဆင့် နားစည်ကို ဖြတ်ပြီးသွားနိုင်ခြေ နည်းသွားပါတယ်။
အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးအဆစ်များကို ပြုပြင်ခြင်းက အရွတ်တွေ ပျက်စီးနိုင်တယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကျောရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုမရှိပါဘူး။
အရွတ်တွေက နုနယ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့အတွက် အသက် ၈နှစ်ကနေ ၁၀နှစ်ကြား ကလေးတွေမှာ ကျောရိုးမကြီးကို ပြုပြင်ခြင်းက ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကျောရိုးမကြီး ပုံပျက်ခြင်း( ကျောရိုးစောင်းခြင်း၊ ရှေ့သို့ကိုင်းသွားခြင်း)ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မွေးကင်းစတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးအဆစ်များကို ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုံလုံလောက်လောက် မရှိသော်လည်း ဒီလိုလုပ်ခြင်းက ငြင်သာတယ်၊ ဘေးကင်းတယ်၊ ထိရောက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးအဆစ်များကို ပြု ပြင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျိုး၊ အပြစ်တွေကို ချိန်ဆပါ။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာနဲ့ဆိုင်သော အကြံများပေးခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနဲ့ ကုသခြင်းများ မလုပ်ဆောင်ပေးပါ။